Maungtintyin: အလျင်စလို မနိုင်ပါနဲ့
သစ်ပင်းများကို နှစ်သက်မြတ်နိုးတဲ့ လူတစ်ယောက်ဟာ သူ့အိမ်ဝိုင်းထဲမှာ အစိမ်းရောင်သစ်ပင်တစ်ပင်ကို တွေ့မြင်ချင်ပါတယ်။ သူက သူဟာ ပင်ပျိုတစ်ပင်ကို စိုက်ပျိုးလျင် သစ်ပင်တစ်ပင်အဖြစ်ကြီးထွားဖို့ အချိန်များစွာ ယူလိမ့်မယ်-လို့ ယူဆထားပါတယ်။ ဒါ့ကြောင့် သူဟာ ဥယျာဉ်တစ်ခုသွားပြီး ပြည့်စုံကြီးထွားနေတဲ့ သစ်တစ်ပင်ကို ရွေးချယ်ခဲ့ပါတယ်။ အဲဒီနောက် သူဟာ အဲဒီသစ်ပင်ကို တူးယူဖို့ ကာယလုပ်သားများအသုံးပြုပြီး သူ စီစဉ်ထားတဲ့နေရာ သူ့ရဲ့အိမ်ဝန်းထဲသို့ အဲဒီသစ်ပင်ကို ယူဆောင်လာခဲ့ပါတယ်။ ဒီအတွက် သူဟာ အလွန်ပျော်ရွှင်ခဲ့ပါတယ်။
သူ့ကိုယ်သူ တွေးထင်တာက “ တိုတောင်းတဲ့အချိန်အတွင်းမှာပဲ ငါဟာ ရှည်လျားတဲ့ခရီးတစ်ခုကို သွားပြီးခဲ့တယ်။ ပျိုးပင်တစ်ခု အဲသလိုမဟုတ် မျိုးစေ့တစ်စေ့ကို စိုက်ပျိုးခြင်းက ရှည်ကြာတဲ့လုပ်ငန်ဆောင်တာကို ယူတယ်။ ဒါ့ကြောင့် အခု ငါဟာ စိမ်းလန်းစိုပြေတဲ့ သစ်ပင်စိမ်း စိုက်ပျိုးခြင်းရဲ့ လျင်မြန်တဲ့ နည်းလမ်းကို တွေ့ပြီ” လို့ ဖြစ်ပါတယ်။
ဒါပေမယ့် နောက်တစ်နေ့မနက် သူဟာ သစ်ပင်ကို ကြည့်ရှု့တဲ့အခါ သစ်ရွက်များက ညှိုးနွမ်းဖို့ စတင်နေပြီဆိုတာ တွေ့ပါတယ်။ နေ့များစွာကြာလာတဲ့အခါမှာ သစ်တစ်ပင်လုံးဟာ ခန်းခြောက် သွားပါတော့တယ်။ သူဟာ စိတ်ပျက်လက်ပျက် ဖြစ်နေပါတယ်။ သူ့ရဲ့သူငယ်ချင်းတစ်ယောက် သူ့ထံ ခရီးလှည့်လည်လာတဲ့အခါ အလွန် ၀မ်းနည်းနေတဲ့သဘောရှိတဲ့ သူ့ကို တွေ့ရပါတယ်။ သူငယ်ချင်းဖြစ်သူက အကြောင်းရင်းကို မေးမြန်းတဲ့အခါ သူက “ငါက အလျင်စလိုဖြစ်ပေမယ့် ဘုရားသခင်က လက်မခံဘူး” လို့ ပြန်ပြောပါတယ်။
ဒီဇာတ်လမ်းက တဖြည်းဖြည်းတိုးတက်မှုကို အခြေခံတဲ့ ပြီးတော့ ရုတ်တရတ် ကျော်လွှားခုန်တက်လို့မရတဲ့ သဘာဝဥပဒေနဲ့ပတ်သက်ပြီး အကျွန်ုပ်တို့ကို ညွှန်ပြပါတယ်။ သဘာဝရဲ့ဒီဥပဒေကို လိုက်နာတဲ့သူဟာ အောင်မြင်မှုကို ရရှိပါလိမ့်မယ်။ အဲဒါကို လိုက်ပါဖို့ ပျက်ကွက်ခြင်းက ကျဆုံးမှုအဖြစ် ပျက်စီးကိန်းကြုံပါလိမ့်မယ်။ သဘာဝရဲ့ဒီဥပဒေကို သစ်ပင်များသာလျင် သက်ဆိုင်တာမဟုတ်ပါ။ ဒါဟာ စကြ၀ဠာဆိုင်ရာဥပဒေ ဖြစ်ပါတယ်။ နယ်ပယ်အသီးသီးမှာ တစ်ဦးတစ်ယောက်ချင်းအနေဖြင့် ဒီသဘာဝရဲ့လမ်းကြောင်းကို လိုက်ပါသင့်ပါတယ်။ သို့မဟုတ်လျင် တစ်ဦးတစ်ယောက်ဟာ ရောက်သင့်ရောက်ထိုက်တဲ့ ဘယ်လိုပန်းတိုင်ခရီးပဲဖြစ်ပါစေ မရရှိနိုင်ပါ။
သစ်ပင်ဟာ ဥယျာဉ်ထဲမှာဖြစ်တဲ့အခါ အဲဒါက အစိမ်းရောင်ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် အဲဒါမျိုးပဲဖြစ်တဲ့သစ်ပင်ကို အခြားနေရာ အ၀န်းအ၀ိုင်းသို့ ပြောင်းရွှေ့တဲ့အခါ အဲဒါက ခြောက်သွေ့သွားတယ်- ဆိုတာ ဘာ့ကြောင့် အဲဒီလို ဖြစ်တာပါလဲ? သစ်ပင်ဟာ ပန်းခြံထဲမှာ ဖြစ်တဲ့အခါ သူ့ရဲ့အမြစ်က ခြေရာလက်ရာမပျက် ပကတိအတိုင်း တည်ရှိပါတယ်။ ဒါပေမယ့် အဲဒါကို အိမ်ဝိုင်းသို့ ပြောင်းရွှေ့တဲ့အခါ ကျန်ရစ်တဲ့ သူ့ရဲ့အမြစ်တွေက အနည်းငယ်ပဲ ရှိတော့တယ်- ဆိုတာက အကြောင်း ဖြစ်ပါတယ်။ ပြီးတော့ ဒါဟာ သစ်ပင်နှင့်တွဲဖက်ပြီး ဘ၀ကို ပညာပေးတဲ့ ရင်းမြစ် ဖြစ်ပါတယ်။
ဒါဟာ သဘာဝဥပဒေဖြစ်ပြီး သဘာဝဥပဒေဟာ လူသားရဲ့ရှင်သန်မှုကို အကျိုးသက်ရောက်စေပါတယ်။ ဒါက သင့်တော်တဲ့ ရင်းမြစ်ကို ရရှိဖို့ လုပ်ငန်းကိစ္စတိုင်းအတွက်, သက်မွေးမှုတိုင်းအတွက်, အဖွဲ့အစည်းတိုင်းအတွက် လိုအပ်ချက် ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါဟာ ကြောင်းကျိုးခိုင်လုံတဲ့ အခြေခံ ဖြစ်ပါတယ်။ သဘာဝရဲ့ ဒီဥပဒေကို ခြွင်းချန်၍ အခြားမရှိပါ။
ဥပမာအားဖြင့် ပညာရေးဟာ job-တစ်ခုအတွက် အခြေခံဖြစ်ပါတယ်။ နာမည်ဂုဏ်သတင်းဟာ business-ရဲ့ အခြေခံ ဖြစ်ပါတယ်။ ပြီးတော့ အခြေခံအဆောက်အဦးဟာ အမျိုးသားရေးဆိုင်ရာ တိုးတက်မှုအတွက် အခြေခံ ဖြစ်ပါတယ်။ စိတ်ချအားထားရတဲ့ အခြေခံအုတ်မြစ်ကို ဖန်တီးတည်ဆောက်ခြင်းဟာ အချိန်များစွာ လိုအပ်ပါတယ်။ အထိန်းအကွပ်မဲ့ ပရမ်းပတာ ဖြစ်ကတတ်ဆန်း ကျော်လွှားခုန်တက် ရယူခြင်းမျှဖြင့် ဤကဲ့သို့သော အခြေခံအုတ်မြစ်တစ်ခုကို သင်ဟာ ရရှိနိုင်မည်မဟုတ်ပါ။
သင်ဟာ တစ်စုံတစ်ခုကိုအောင်မြင်ဖို့ အလောတကြီး ကတိုက်ကရိုက်ပြုလုပ်လျင် ဒါဟာ သဘာဝရဲ့ဥပဒေကို သင်က ငြင်းပယ်နေတယ်လို့ ဆိုလိုပါတယ်။ သင်ဟာ သင့်ရဲ့ကိုယ်ပိုင်အရည်အသွေးအပေါ်မှာ ကမ္ဘာတစ်ခုကို တည်ဆောက်ချင်တာ မဟုတ်ပါ။ ပြီးတော့ ဒီလိုဖြစ်စဉ်အမျိုးအစားက ဒီကမ္ဘာမှာ မဖြစ်နိုင်ပါ။ တဖြည်းဖြည်း ဖြစ်စဉ်တစ်ခုမှာ ပါဝင်တဲ့သူများဟာ သဘာဝရဲ့ အားပေးထောက်ခံမှုများကို တွေ့ရှိရပါလိမ့်မယ်။ ပြီးတော့ ဒီလို ထောက်ခံအာပေးခံရခြင်းမရှိဘဲ ဒီကမ္ဘာမှာ အောင်မြင်မှုဟာ ဖြစ်နိုင်ချေမရှိပါ။
သဘာဝရဲ့လမ်းကြောင်းအဖြစ် ဒီတဖြည်းဖြည်းဖြစ်စဉ်ကို ဘာ့ကြောင့် ဘုရားသခင်က ထုတ်ပြန်ကြေငြာသလဲ? သူဟာ ခိုင်မာကျစ်လစ် တစ်စုတစ်စည်းတည်းဖြစ်ခြင်းရဲ့ ရည်ရွယ်ချက်အတွက် အဲဒီလို ပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။ သင်ဟာ အခြေအနေအကြောင်းအရာတွေနဲ့ပတ်သက်လို့ ကျော်လွှားခုန်တက်ခြင်းဖြင့် တစ်စုံတစ်ခုကို ရရှိအောင်မြင်ဖို့ ကြိုးစားလျင် နောက်ဆုံရလဒ်က အမြစ်ပြုတ်တွယ်ရာမဲ့ဖြစ်တဲ့သစ်ပင်ကဲ့သို့ ဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။ ဒါပေမယ့် တဖြည်းဖြည်းဖြစ်စဉ်ကို အပိုင်ယူရပ်တည်ထားတဲ့အခါ သင်ဟာ သင့်ရဲ့အောင်မြင်မှုကို ခိုင်မာကျစ်လစ် တစ်စုတစ်စည်းတည်းဖြစ်စေပါတယ်။
kakdi အပင်တစ်ပင် ကြီးထွားဖို့ ၆-လသာ လိုအပ်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် သင်ဟာ ၀က်သစ်ချပင်လို သစ်တစ်ပင်ကို ကြီးထွားစေချင်တယ်ဆိုလျင်တော့ ဖားဖားလျားလျားထွားကြိုင်တဲ့ အပင်တစ်ပင် ထွက်ရှိဖို့ နှစ် ၅၀-ကြာ အချိန်ယူရပါလိမ့်မယ်- ဆိုတာ စိုက်ပျိုးရေးသမားတစ်ယောက်က မဆိုင်းမတွ မှန်ကန်စွာ ထောက်ညွန်ပြမှာပါ။ ဒီဥပမာမှ သဘာဝရဲ့ဥပဒေဟာ ဘယ်လို ကောင်းကောင်းလည်ပတ်အလုပ်လုပ်တယ်- ဆိုတာ တစ်ဦးချင်းအနေဖြင့် နားလည်နိုင်ပါတယ်။